२०७५ को एसइई चैत १० बाट ,राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी यस्ता छन । – www.agnijwala.com
Breaking News: जि–२०’ को बौद्धिक समूह बैठकलाई सम्बोधन गर्न डा.महत टोकियोमा / भारतको लोकसभा चुनाव : २३ राज्यमा काङ्ग्रेस गुमनाम / केपीले जबज नछोड्ने भएपछि नेकपामा अर्को सङ्कट ! / ललितानिवास प्रकरणः लाखमा किनेर करोडमा बिक्री / विप्लवले गर्यो जेठ १३ गते नेपाल बन्दको घोषणा (विज्ञप्ति सहित) /
२०७५ को एसइई चैत १० बाट ,राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी यस्ता छन ।
माध्यमिक तहको फलामे ढोकाको रुपमा स्थापित यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई चैत १० गतेबाट सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको परीक्षा १० चैतबाट सञ्चालन गर्ने गरी सबै विषयको परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले एसइई परीक्षाको तयारी भइरहेको र पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुने बताए । प्राविधिक धारको समेत गरी २१ चैतमा परीक्षा सम्पन्न हुनेछ । अघिल्लो वर्ष ८ चैतबाट एसइई परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
प्रश्नपत्र केन्द्रबाट र उत्तरपुस्तिका प्रदेशस्तरबाट तयार हुँदै छन् । पौडेलले प्रश्नपत्र तयारी र नतिजा प्रकाशन केन्द्रबाट हुने पौडेलले बताए । अहिले देशभरबाट एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थीको डाटा इन्ट्रीको काम भइरहेको छ उनले भने -‘यो सम्पन्न भएपछि वास्तविक रुपमा कति विद्यार्थीले एसइई परिक्ष दिनेछन् थाहा हुन्छ ।’
भारतको लोकसभा चुनाव : २३ राज्यमा काङ्ग्रेस गुमनाम
केपीले जबज नछोड्ने भएपछि नेकपामा अर्को सङ्कट !
विप्लवले गर्यो जेठ १३ गते नेपाल बन्दको घोषणा (विज्ञप्ति सहित)
जि–२०’ को बौद्धिक समूह बैठकलाई सम्बोधन गर्न डा.महत टोकियोमा